कोरोना बढेपछि तीन साता शैक्षिक संस्था बन्द गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस, लक डाउन पुनः लगाउने बिषयमा पनि जारि गर्यो सर्वसाधारणका लागि यस्तो सूचना ! – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /News/कोरोना बढेपछि तीन साता शैक्षिक संस्था बन्द गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस, लक डाउन पुनः लगाउने बिषयमा पनि जारि गर्यो सर्वसाधारणका लागि यस्तो सूचना !
कोरोनाको दोस्रो लहर फैलन सक्ने भन्दै आवश्यक सतर्कता अपनाउन कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी)ले आग्रह गरेको छ । सिसिएमसीको आजको बैठकले पछिल्लो समय कोभिड सङ्क्रमणको मात्रा बढेको र नयाँ स्वरूपको भाइरस देखिन थालेको भन्दै आवश्यक सतर्कता जरुरी रहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सचिव खगराज बरालका अनुसार बैठकमा पछिल्लो सङ्क्रमणको स्थिति तथा तयारीको विषयमा छलफल गरिएको र आमरूपमा सतर्कता अपनाउन अपिल गर्ने निर्णय भएको छ ।
बैठकले पारित गरेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद बैठकबाट अनुमोदन भएपछि नयाँ मापदण्ड लागु हुने बताइएको छ ।
कोरोना संक्रमण उच्च रूपमा बढ्ने देखिएपछि सिसिएमसीका संयोजक तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले शनिबार सबै सरोकारवाला मन्त्रीहरूलाई बोलाएर सिंहदरबारमा छलफल गरेका हुन्। बैठकमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलसहित गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, स्वास्थ्यमन्त्री हृदेश त्रिपाठी, पर्यटन मन्त्री भानुभक्त ढकाल लगायत मन्त्रीहरू सहभागी भई छलफल गरेका हुन्।
‘हामीले आफ्नो तर्फबाट नेपाललगायत छिमेकी देशसहित अन्य देशमा भइरहेको कोरोना संक्रमणको अवस्था कस्तो छ? कसरी नियन्त्रण गरेका छन् ? भन्ने विषयमा ब्रिफिङ गर्‍यौं’, सिसिएमसीका सचिव खगराज बरालले भने, ‘नेपालमा कोराना संक्रमण कम गर्न पहिलो चरणमा के के काम गर्न सकिन्छ? दोस्रो चरणमा पुगेपछि राज्य र नागरिकले गर्नुपर्ने दायित्व के के हुन्? भन्ने विषयमा मसिनोगरी आफ्नो कुरा राख्याैं।’
सिसिएमसीले कुनै निर्णय गर्ने भन्दापनि कोरोना संक्रमणको पछिल्लो अवस्थाको विषयमा ब्रिफिङ मात्रै गरेको बरालले बताए। तर, बैठकमा विभिन्न कोणमा छलफल भएपनि कुनै निर्णय नभएको उनले बताए।
सिसिएमसीले आफ्नो तर्फबाट कुरा राखेपछि सबै मन्त्रीहरूले आ-आफ्नो धारणा राखेका थिए। पहिलो चरणमा शहरी क्षेत्रमा भीडभाड कम गर्नुका साथै स्वास्थ्यको मापदण्ड कडाईका साथ पालना गर्नुपर्ने मन्त्रीहरूले सुझाव दिए। सीमा आवातजावत कडाइ गर्नुका साथै स्वास्थ्य चेक जाँचको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्।
लकडाउन गर्ने, शैक्षिक संस्था, फिल्म हललगायत बन्द गर्ने विषयलाई दाेस्रो विकल्पका रूपमा राखिएको उनले बताए। सिसिएमसी संयोजक पोखरेल हुन् भने सदस्यमा अरु १० सदस्यमा मन्त्री र सचिव रहेका छन्। जसमा गृह, परराष्ट्र, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य,उद्योग, पर्यटन,अर्थमन्त्री सदस्य हुने व्यवस्था छ। मुख्यसचिव र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव सदस्य हुने व्यवस्था छ।